Service - Hangzhou Poly Air Ulwahlulo Equipment Co., Ltd
Umvelisi wegesi wePsa
inkonzo yokuthengisa Pre
Umsebenzisi okanye namanye amasebe ukuba inyaniso, ulwaziso eneenkcukacha iimveliso yenkampani, yaye mayinike idatha enxulumene zobugcisa yeyona egqibeleleyo, ukuncedisa i-unit uyilo ukwenza ukutshintshiselana zobugcisa, ukumamela umsebenzisi kwaye izindululo kumasebe afanelekileyo, ku iimveliso uyilo kunye nokuveliswa ngokungqinelana simo, ukuphucula iimveliso, ukuhlangabezana neemfuno zenkqubo users.Provide ulwabiwo olufanelekileyo kubasebenzisi ngokungqinelana imeko esisi.
Ngayo ngokunxulumene nemithetho echaphazelekayo, imithetho kunye nemigaqo karhulumente kunye namalungelo kunye noxanduva wokutyikitywa kwesivumelwano zilandele ngqo imiqathango contractperformance.- emva komhla wokuqalisa kwesivumelwano ukuya kubasebenzisi and Design Institute ukuba provideequipment imizobo kunye nolwazi eneenkcukacha.
Isixhobo mveliso ngokungakhethiyo isiqinisekiso imveliso, uluhlu ukupakisha, isiqinisekiso wokuvelelwa, kwesiqinisekiso yogcino loxinzelelo kunye nemiyalelo yokusebenzisa.
Kwikomkhulu nkampani emva kokuba isebe inkonzo kwentengiso, kunye nokusekwa ofresident ofisi kummandla multi wesizwe,-ofisi nganye lixhotyiswe nabasebenzi zobugcisa yobungcali ukunika iteknoloji PSA kunye kakhulu eziphambili zobugcisa planfor umsebenzisi, olufike ngakumbi ukunika abasebenzisi nomgangatho emva inkonzo sentengiso. Emva saleservice ikomkhulu inkampani yefowuni: 13868185226/13588050818
Ufakelo izixhobo kunye nexesha wayethuma, inkampani ngokutsho ikhontrakthi yaye yavuma ukubanika iinkonzo ezinxulumene.
Wafumana telex okanye ngefowuni abasebenzisi, inkampani lenkonzo yomxhasi servicedepartment uya ngokukhawuleza phendula, ukuba kuyimfuneko emva abasebenzi benkonzo intengiso unako ukufikelela umsebenzisi on-site yokulungisa izixhobo.
Thina ukuseka irekhodi yomsebenzisi, ukunceda ulawulo imishini umsebenzisi; ukukhumbuza qho abasebenzisi endaweni enxibe iindawo, uze ujonge izixhobo kunye nemiba ezifuna ingqalelo; kumisa lwefayile yokumbulo iinkonzo nesevisi yabaxumi, yokulondolozwa yokondla umsebenzisi ezamahala izixhobo ukhokelo.
Ifowuni isikhalazo: ukuba ngaba inkqubo yentsebenziswano kunye inkampani officeshave nayiphi awukoneliseki, lungohlulwa lube wolawulo lwezentengiso polyempty iziko kwi ngeeyure zomsebenzi ezisemthethweni uzitsalele izikhalazo Tel: 13868185226/13588050818
Ifowuni: +86 571 6343 0099